7 cunto oo leh fitamiin C ka badan liinta
Si aad caafimaadka u ilaaliso, xogta caafimaad ee hadda jirta waxay muujinaysaa in nin weyn oo lab ah waa inuu helaa ugu yaraan 90 mg oo fitamiin C / machadyada caafimaadka ee qaranka fitamiin C maalin kasta. Haweeney, ugu yaraan 75 mg. Haddii aad uur leedahay, naas nuujinayso ama aad sigaar cabto, gunnadaada maalinlaha ah waxaa lagu kordhinayaa 35-45 mg.
Jidhka bini'aadamku ma yaqaan sida loo farsameeyo oo loo kaydiyo ascorbic acid. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aan ka helno dibadda. Tusaale ahaan, cunto. Dhakhaatiirtu guud ahaan waxay u arkaan habkan lagu helo fitamiinada inuu yahay kan ugu caafimaadka badan uguna waxtarka badan.
Orange, laga yaabee isha ugu caansan ee ascorbic acid, waxaa ku jira Oranges, cayriin, dhammaan noocyada ganacsiga / Nafaqada, 53 mg oo walax ah 100 g oo saxarka ah. Laakiin tani aad ayey uga fog tahay rikoor.
Halkan waxaa ah 7 cunto oo ay ku jiraan dhowr jeer oo fitamiin C ka badan kuwan miraha liinta ah. Jid ahaan, tani maahan khatar: jidhku ma nuugo ascorbic acid xad-dhaaf ah, laakiin wuxuu soo saaraa kaadida.
Sawirka: MadeleineSteinbach / Sawirada Depositphotos
Misigta Rose, duurjoogta (Northern Plains Indians) / NafaqadaData waxay ka kooban tahay 119 mg oo fiitamiin C ah (ama 426 mg 100 g) oo ku saabsan 6 miro cusub oo dhexdhexaad ah. Tani waxay ugu yaraan 30% ka badan tahay qiimaha maalinlaha ah ee loo baahan yahay.
Run, si aad u hesho qadarka faa'iidada leh, miskaha Rose waa in la cunaa cayriin. Vitamin C waxaa baabi'iyay Gao-feng Yuan, Bo Sun, Jing Yuan, Qiao-mei Wang. Saamaynta hababka cunto karinta ee kala duwan ee xeryahooda kor u qaadaya caafimaadka ee brokoli / Journal of Zhejiang Univerity. Sayniska marka la kululeeyo, sidaa darteed, haddii aad ku shubto biyo karkaraya berry, waxay halis u yihiin inay lumiyaan ilaa 30% ascorbic acid ay ku jiraan.
2. basbaaska basbaaska
Sawirka: karandaev / Depositphotos
Haddii aad jeceshahay cunto kulul oo caafimaad leh, dooro basbaaska basbaaska cagaaran. Hal basbaas, basbas kulul, cagaar, cayriin / Nafaqada 109 mg fitamiin C (ama 242 mg 100 g). Marka la barbardhigo, basbaaska cas ee isku midka ah, 65 basbaas, basbas kulul, casaan, ceeriin / Nafaqada mg.
Haddii fitamiin C-ga sarreeya uu yahay dood daciif ah inaad ku darto xawaash aad u kulul saladh iyo maraqa, halkan waxaa ah dhowr kale. Capsaicin / Jaamacadda Michigan Caafimaadka waxaa la rumeysan yahay inay tahay maaddada capsaicin, taasoo siisa basbaaska dhadhanka dhadhanka leh, waxay ka caawisaa yareynta xanuunka asalka kala duwan, waxayna la dagaallantaa bararka. Iyo sidoo kale isticmaalka basbaasku wuxuu wanaajin karaa dheef-shiid kiimikaad wuxuuna dedejin karaa gubashada baruurta, daraasad yar oo M. Yoshioka, S. St-Pierre, M. Suzuki, A. Tremblay. Saamaynta basbaaska cas ee lagu daray cuntooyinka karbohaydrayt sare-sare iyo dufan sare leh ee dheef-shiid kiimikaadka tamarta iyo ka faa'iidaysiga substrate ee dumarka Japan cunto. Chile
3. Basbaaska jaalaha ah ee macaan
Sawirka: nungning20 / Depositphotos
Way ku filan tahay inaad cunto 100 g oo ah basbaaska jaalaha ah ee macaan (tani waa miisaanka miro dhexdhexaad ah), waxaadna heli doontaa Basbaaska, macaan, jaalaha, cayriin / Nafaqada oo ku saabsan 180 mg oo fitamiin C ah. Taasi waa, ugu yaraan laba jeer qiimaha maalinlaha ah.
Basbaaska cas ee dhalaalaya, ascorbic acid wax yar ayaa ka yar, 128 mg 100 g oo badeecad ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay sidoo kale ku filan tahay inay si buuxda u siiso jirka ascorbic acid.
4. Currant madow
Sawirka: jag_cz / Sawirada Depositphotos
Qiyaastii hal galaas (100 g) oo currants ah ayaa siin doona Currants, madow Yurub, cayriin / Nafaqada 181 mg oo fitamiin C. Iyo sidoo kale qadar hufan oo anthocyanins ah oo ka socda Gina Borges, Alexandra Degeneve, William Mullen, Alan Crozier. Aqoonsiga flavonoid iyo antioxidants phenolic ee currants madow, blueberries, raspberries, currants cas, iyo cranberries / Journal of Agricultural and Food Chemistry, pigments dhirta leh sifooyinka antioksidanter.
Sawirka: olhaafanasieva / Depositphotos
Marka la eego garaamyada, thyme waxa ku jira 3 jeer ka badan fiitamiin C ka badan liinta: ilaa 160 mg of Thyme, daray/NafaqadaData 100 g oo xawaash ah.
Dabcan, uma badna inaad cuntid qadarkan thyme. Laakiin xitaa haddii aad kaliya ku rusheeyso 1-2 qaado oo cagaar ah oo la jarjaray salad, waxaad heleysaa ilaa 7 mg oo ascorbic acid ah.
100 g oo geedo yaryar ah, in ka badan 130 mg oo dhir ah, ceeriin/NafaqadaData fitamiin C. Si deeqsinimo leh ugu saydhaa salad ama maraq, oo hel ugu yaraan 10% qiyaasta maalinlaha ah ee ascorbic acid.
Intaa waxaa dheer, dhir, sida cagaarka caleenta kale, waa il heer sare ah oo aan birta ahayn. Noocan macdanta ah ayaa ku jira cuntooyinka dhirta waana mid aan la milmin marka loo eego heme xayawaanka. Laakiin joogitaanka fitamiin C, jidhku wuxuu nuugaa birta dhirta si aad uga wanaagsan Vitamin C / Machadyada Caafimaadka Qaranka. Markaa isticmaalka dhir ayaa loo tixgelin karaa, iyo waxyaabo kale, si looga hortago dhiig-yarida birta.
Sawirka: murilomazzo / Depositphotos
Miraha qalaad ee hilib casaanka leh waxaa ku jira 4-5 jeer ka badan fiitamiin C marka loo eego liinta iyo miraha kale ee liinta, qiyaastii 228 mg Guavas, xogta caadiga ah, ceeriin / Nafaqada 100 g.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 7 cunto oo leh fitamiin C ka badan liinta!